किन रोकियो राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार ? « Ramailo छ
किन रोकियो राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार ?
प्रकाशित मिति : Jul 9, 2017
चलचित्र विकास वार्डले आफ्नो वार्षिक उत्सव, असार १६ मा वितरण गर्दै आइरहेको राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार यो वर्ष भने असार सकिन लाग्दा समेत हुने छाँटकाँट देखिएको छैन । अध्यक्ष राजकुमार राईको जेठ २४ गते कार्यकाल सकिएको र नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भैनसकेकाले राष्ट्रिय पुरस्कार रोकिइ रहेको हो । कहिले हुन्छ त अब पुरस्कार वितरण ?
नयाँ अध्यक्ष नियुत्त भए लगत्तै राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार वितरण गरिने विकास वोर्ड सचिवालय प्रदर्शन तथा वितरण अधिकृत चिरञ्जिवी गुँरागाइंले जानकारी दिए । ‘नयाँ अध्यक्ष आएको एक महिनामै अवार्ड हुन्छ’, गुँरागाईले भने । नयाँ विकास वोर्ड अध्यक्षका लागि पुर्व अध्यक्ष राई, अभिनेता शिव श्रेष्ठ र निर्देशक दयाराम दाहाल काँङग्रेस केन्द्रमा दौडधुप गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय पुरस्कारको लागि जुरीले फिल्म हेरेर निर्णय खामबन्दीको अवस्थामा छन् ।